Cusbo - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Cusbo)
Milixda waxaa laga helaa biyoha badaha.
Milix ama Cusbo (Af-Carabi: ملح Af-Taliyaani: sale Af-Ingiriis: salt) waa Isku dhis macdan quruurax ah oo laga helo biyoha dhanaan e badaha. Cusbadu waxay ka samaysan tahay curiyeha Sodhiyaam iyo Koloriin, waa isku dhiska SodhiyaamKoloraydh (NaCl).
Si dabiici ah ayaa Milixda looga helaa biyaha badaha taas oo halkii litir ee biyaha bada ah 35g ayaa Cusbo ah una dhiganta 3.5%. Cusbadu aad ayay muhiim ugu tahay dhismaha jidhka bani-aadamka, waana billowga dhadhanka ee wax walba. Guud aahaan qadarka cusbo ee ku jirta jidhka xayawaanka ayaa ka badan xadiga laga heli karo jidhka dhirta.
In ka badan 6000 oo sanno ka hor ayaa Milixda la isticmaali jiray, waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu da'da weeyn ee Aadamuhu aqoonta u leeyihiin.
Sida caadiga ah Cusbada waxaa laga keenaa ayadoo la uumi-bixinayo biyaha bada ama laga qodayo godad eey ku qalshay. Sidoo kale warshaduhu waxay ka sameeystaan falgalka Sodhiyaam iyo Koloriin.
Marka laga yimaado ku darsiga cuntada iyo cabitaanka, isku dhisyada Milixda waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo kimiko warshaduhu isticmaalaan, bacaha, waraaqadaha xamagta iyo waxyaabo kale oo badan.
= Taariikhda Milixda
1 Noocyada Milixda
2 Isku Dhisyada Dabiiciga
3 Fal-galka Curiyeha Milixda
4 Isticmaalka Milixda
5 Soo Saarka Milixda
Isku Dhisyada Dabiiciga
Fal-galka Curiyeha Milixda
Soo Saarka Milixda
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Milix&oldid=196789"